Ọrụ Ntanetị Semalt
Á »If bá» the rá »If na á» ‹chá» rá »ezi SEO na analytic á» ‹de blá» gá »you've, you've na-abịa ebe ziri ezi. N'ihe karịrị 636,471 ndị ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ 1,472,583 nyochara, Semalt nwere afọ ojuju ndị ahịa na nyocha iji gosi. Mana maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị bụ ndị na - aghọtaghị ihe SEO na nyocha weebụ bụ, ị kwesịrị ịrapagidesi ike.
Nabata na Semalt, onye isi SEO na websaịtị nyocha. Anyị abụghị ụlọ ọrụ Mickey Mouse ọ bụla na-achọ iwepụ ego gị siri ike. Kama, anyị bụ ụlọ ọrụ dijitalụ zuru oke. Also ga-ezutekwa ndị otu anyị nwere ahụmịhe na ndị ọrụ aka.
Ndị otu anyị bụ ọkachamara na SEO na ọkachamara nyocha weebụ nke dị njikere mgbe niile ịbịaru mkpa gị niile. Should kwesịrị ịdị na-enwere onwe gị izute ha na iso ha kwurịta okwu. Ha bụ aka-ọrụ, ndị na-eme ihe ike na ndị nwere mkpali bụ ndị nwere ọtụtụ ọrụ IT na Pọtụfoliyo. Ikwesiri izute turbo, akara Semalt, na ọfịs ụgbọ mmiri ọfịs anyị.
Ọ bụrụ n’ị ka na-eche ihe anyị n’eme, anyị bụ nkọwa.
Semalt na-enye ọrụ SEO na nyocha nrụọrụ iji nyere aka na-ebute ma na-eduga ndị ahịa anyị. Anyị na-aga n’ihu n’inyocha ebe nrụọrụ weebụ ma hụ na a gbanwere ndị nke ahụ ịbụ ndị ahịa. Yabụ, ee, anyị na - enyere gị aka ị nweta ego site na ịdọrọ ndị ahịa ahịa gị site na iji Internetntanetị.
Na ịre ahịa ịntanetị, ndị ahịa eritela uru site na iji SEO na-ekwupụta nkwupụta dịka SEO nkume !!! Na nke a bụ ihe kpatara ya
Nghọta dị mkpa SEO na Nchịkọta Weebụ
SEO kwụ ọtọ maka njikwa nyocha. Nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta ọdịnaya weebụ gị site n'aka Google. Ọtụtụ oge, ndị ọrụ na-akpọsa ma ọ bụ biputere ọdịnaya na ịntanetị na-enweghị ịghọta otú o si arụ ọrụ. Cheedị echiche ebe ahịa dị ihe karịrị ijeri anọ na nde ndị ọrụ na ihe karịrị otu ijeri weebụsaịtị. Ee, ọ bụghị weebụsaịtị ndị a niile na-enye otu ọrụ, mana ọzọkwa enweghị nke pụrụ iche. Ihe ọ bụla ọ bụ ihe ịchọrọ ime, enwere weebụsaịtị ọzọ na-enye ihe yiri nke ahụ. Yabụ, iji hụ na amatara ngwaahịa gị, anyị na-eji SEOs.
Know mara otu esi aga n’ihu Google oge ụfọdụ ịchọrọ maka ngwaahịa na isiokwu, mana ị na-enweta peeji nke nzaghachi? Ama m na inwere, i nweghi mkpa ịza ya.
Agbanyeghị, Google na-ahazi nsonaazụ ọchụchọ gị n'otu usoro. Ugbu a, nke ahụ abụghị chi, ọ bụ mmetụta nke SEO. Ọtụtụ ndị na-eji ịntanetị ugbu a na-achọta azịza nke ajụjụ ha jụrụ na nsonaazụ ọchụchọ ise mbụ gosipụtara. Nke a pụtara na ndị ọrụ ịntanetị anaghị enwe ike ịga leta nsonaazụ 5-7 ndị ọzọ na ibe mbụ. Mgbe ahụ, chee banyere nsonaazụ ọchụchọ na peeji nke abụọ, ma ọ bụ nke atọ. Everchọtụla ihe wee gaa na peeji nke atọ? Nke a gosipụtara etu esi rụọ ọrụ SEO dị mkpa.
Dịka onye nwere azụmahịa ma ọ bụ weebụsaịtị, ịchọrọ iwepụta ọtụtụ okporo ụzọ dị ka o kwere mee naanị n'ihi na ịpị karịa ga-apụta karịa inwekwu ego (n'ezoghị ọnụ). Yabụ mgbe ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ọrụ gị gosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ izizi atọ, ị maara na ọ bụ nnukwu ọrụ. Ọ bụ ya mere ịchọrọ anyị.
Semalt na-etinye gị n’elu olu nke nri, ị ga-ebu ụzọ hụ. Iji mee nke a, anyị na-eji isi okwu na nyocha weebụ sara mbara. Ọ bụ ezie na isi okwu bụ okwu anwansi nke ịntanetị, ị ka chọrọ njikwa weebụ maka ndị ọrụ iji pịa, gụọ, ma ọ bụ nye iwu. Ihe ndị a na-enyere Google aka, na ihe nchọta ọchụchọ ndị ọzọ ịchọta ọdịnaya gị ngwa ngwa mgbe onye ọrụ ọ bụla na-achọ ihe ọ bụla metụtara gị.
Ya mere, ọ bụrụ na onye ọrụ na-achọ ebe ọ ga-azụta akpụkpọ ụkwụ, Google na-achọ isi okwu na weebụsaịtị, mana na-enweghị weebụsaịtị kwesịrị ekwesị, ndị ọrụ agaghị enye nsogbu ịzụ ahịa na saịtị gị.
Nke a bụ ndepụta nke ọrụ Semalt na-enye
Nchekwa onwe SEO
Kinddị SEO a na-ekwe nkwa nnukwu nsonaazụ na obere oge. Ihe ngwugwu SEO a bụ ngwugwu ụlọ zuru ezu maka azụmahịa gị n'ịntanetị.
Nke a na - eme ka ị nweta ọhụụ na ebe nrụọrụ weebụ gị
Opt na-enweta njikarịcha peeji
Anyị na-enye ụlọ njikọ
Nnukwu nchọpụta isiokwu
Akụkọ nyocha weebụ
Websitemepụta weebụsaịtị dị egwu abụghị ihe ọ ga-ewe iji mepụta okporo ụzọ. Y’oburu n’inweghi ihe omuma banyere otu esi eme ya ya n’elu onodu di elu na Google, odighi mkpa. Maka ọnụahịa naanị $ 0.99, ị na-amalite mkpọsa SEO nke ga-eme ka ị baa uru. Ọbụna dị ka onye mbido na njikarịcha igwe nyocha, anyị na-enye gị ihe niile ịchọrọ ịkwalite weebụsaịtị gị n'ịntanetị. Anyị na-enye ohere ị nweta usoro okpu a na-acha ọcha okpu SEO maka ọrụ gị. Ma ọ bụ, ị nwere ike ibuga ahụmịhe ndị ahịa gị kachasị mma site na ịnye ọrụ SEO dabere na teknụzụ anyị pụrụ iche. Kwe ka onwere SEO ngwa ahia gha enyere gi aka ma nye gi ihe osiso ma nwekwa nha 100%.
Kedu onye bụ onyinye a?
Auto SEO nwere ike ịba uru nye ndị webmasters, obere azụmaahịa ma ọ bụ mmalite, ụlọ ọrụ, na ndị nweere onwe ha.
Nke a bu usoro SEO di elu nke emebere maka oganihu ahia gi. Nke a na - eme ka ị ruo n’elu Google.
Ihe ngwugwu a na-enye:
Idozi ebe nrụọrụ weebụ
Ederede nke ihe odide
Nkwado na nyocha
Ebumnuche nke azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịbụ nke kacha mma. Cheedị na ụlọ ọrụ gị na-apụta na ndepụta ụlọ ọrụ Forbes kachasị ukwuu. Eledala echiche ahụ anya; enwere ike iji ihe atọ dị mkpa ahịa, uru, na mmekọrịta. Ihe ndia bu isi ihe ichoro ka ị ghara idi n ’uwa ahia.
FullSEO ga - enyere gị aka ịgwakọta ihe atọ niile, na - enye gị isi mmalite ịba ụba. Ndị otu anyị nke ndị ọkachamara SEO na-etolite ma na-eme atụmatụ nke onwe maka njikarịcha igwe na nkwalite weebụ ahaziri nke ọma iji dabara na mkpa azụmahịa gị. Site n'enyemaka anyị, saịtị ụlọ ọrụ gị ga-ewe ọ bụghị naanị peeji nke mbụ kama na ebe kachasị elu na nchọta Organic nke Google. Mgbe ọ bụla ndị mmadụ na-achọ ngwaahịa ọ bụla nke ihe ị na-enye, anyị ga-akpụrụ ha na saịtị gị.
Kedu onye uru Semalt FullSEO?
Ezie na ngwungwu ngwugwu anyị nke FullSEO bụ nke akwadoro maka ọrụ azụmaahịa na azụmahịa e-commerce, ọ bakwara uru ịmalite ndị nwe ụlọ na webmasters yana ndị ọchụnta ego chọrọ ịme ihe kachasị na weebụsaịtị ha.
Nchịkọta webụsaịtị weebụ
Anyị nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị ma were ha gaa na ogo 10 kachasị elu nke Google na obere oge enwere ike. Site na iji Semalt isi isiokwu na ndị aghụghọ, ị ga-anọ na-aga n'ihu.
Anyị na-enye ọrụ ndị dị ka:
Lelee ebe nrụọrụ weebụ gị
Ikpupute visibiliti gị na ntanetị
Ringgagharị na ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi
Chọpụta mmejọ njiri peeji
Anata mkpesa webụsaịtị zuru oke.
Na-anwa iru elu, mana ọ naghị arụ ọrụ? Ndị na-ege gị lekwasịrị anya anaghị achọta ebe nrụọrụ weebụ gị? Nweta azịza nye ajụjụ ndị a site na iji Semalt Webụ Ihe Nlekọta Webụ maka nyocha na nyocha gị. Onye nyocha akara okwu ntanetị n'ịntanetị na-egosipụtakwa ọnọdụ weebụsaịtị gị na Google SERPs. Mgbe nke a gasịrị, anyị na-atụ aro maka isiokwu ga-adọta ndị na-ege gị ntị. Chọpụta ihe ndị mmadụ na-achọkarị ma gwa ha ihe dị ha mkpa. Site na nyochaa asọmpi gị, anyị na-achọpụtapụta ihe nzuzo ha ka ha gaa nke ọma. Mgbe nke a gasị, anyị na-agbanwe ma jiri ihe ọhụụ a maka ịkwalite ntanetị gị.
N'ikpeazụ, anyị na-ewepụta akụkọ weebụ zuru ezu ma na-enyere aka idozi njehie ndị anyị chọpụtara. Dịka ndị ọrụ weebụ, anyị na-enyere gị na weebụsaịtị gị aka ịba ọgaranya.
Kedu onye bara uru na Semalt Web Analytics?
Anyị na-akwado nke a maka onye ọ bụla chọrọ ị nweta ihe kachasị na weebụsaịtị ha. Webmasters, obere ndị ọchụnta ego, ụlọ ọrụ, mmalite, na ndị nweere onwe ha nwekwara ike iji ọrụ a.
Anyị na-emepụta weebụsaịtị dị ịtụnanya maka ụlọ ọrụ na onye ọrụ ọ bụla. Saịtị anyị mepụtara nwere ike ịghọ HQ dijitalụ maka ihe ọ bụla dị na ntanetị, sitere na ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị, azụmahịa nkeonwe, na ụlọ ahịa, ma ọ bụ ihe nkiri maka ndị okike, ndị na-ese ihe, ndị ọrụ ndị ọzọ niile nwere echiche dị ịtụnanya ha kwesịrị iji nweta ịntanetị. You nwere ike ịtụkwasị obi n'ọrụ ọrụ anyị iji nweta nlebara anya ị kwesịrị inweta.
Ọdịdị weebụsaịtị gị na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ngwaahịa gị. Ihe oyiyi na-adọrọ adọrọ, agba, na imewe ihe dị mkpa dịka akwa gị na-eme na ndụ n'ezie. Weebụsaịtị na-adọrọ adọrọ nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi onye ga-anọ ele ihe ndị dị na weebụsaịtị gị.
Ihe omume mmepe weebụ anyị na-enye:
Ihe na-adọrọ adọrọ ma rụọ ọrụ
Mmejuputa atumatu CMS
Ntinye ihe ntinye nke ire ere na API
Nkwado na ndozi
Ole ndị bara uru na atụmatụ Semalt web Development?
Webmasters, obere ndị ọchụnta ego, ụlọ ọrụ, ndị mbido, na ndị nweere onwe ha kwesịrị ịnwere onwe ha ịlele nke a.
Were ihe nkịtị ma mee ha pụrụ iche. Anyị na-enye echiche gị, ndụ, mmegharị, olu na ihe omume gị.
Anyị na-azụlite echiche gị
Dee edemede ahụ
Mepụta edemede ahụ
Jiri mkpuchi ụda olu ọkachamara
Ekwula agwa ndị na-ekiri ihe ị na-enye, gosi ya. Ihu n’ihu asọmpi gị, ịkwesịrị iche n’echiche na mpụga igbe. Mee ihe ka ukwuu karịa ihe onye gị na ya na-asọrịta mpi nwere ike ịtụle. Site n'enyemaka anyị, ị ga-enwe vidiyo na-arụkọ ọrụ ọnụ nke enweghị obi abụọ ga-amasị ndị ahịa gị. Gwa anyi echiche gi ma lee anya ka anyi gbanwee ya na vidiyo nkwalite i nwere ike deputa ka itughari ndi ahia gi ihe. Vidiyo na-eme ụzọ dị ụtọ iji kpaa ozi gị. Na-ekwu ọtụtụ ihe karịa oge dị mkpụmkpụ ma hapụ ha ka ha cheta ụdị gị ka ha na ndị enyi ha na-ekerịta vidiyo gị. Ga-enweta obi ụtọ n'ahịa azụmaahịa n'ihi vidiyo ịkọwapụta mma.
Stack zuru ezu
Otu ụbọchị, ọ bịara anyị na ihe nyeere azụmaahịa anyị aka ịrụ ọrụ maka ndị ọzọ. Anyị na-enyere gị aka ịmepụta akara, anyị na-akwalite ya na web. Anyị maara na anyị niile nwere mmasị n'ịrụ naanị ihe niile, mana ọrụ ụfọdụ kwesịrị ịhapụ ndị ọkachamara. Ka anyị nye gị nsonaazụ dị ịtụnanya n’ọrụ anyị. Site na ahụmịhe bara ụba ị nweta achicha ahụ zuru oke n’enweghi nsogbu n’iru anyị idozigharị uzomume anyị. Anyị ga-eji aka ọrụ wulite ma zụlite atụmatụ maka ịkwalite weebụsaịtị gị na weebụ.
Nke a bụ ihe anyị na-akpọ ọrụ ndị dijitalụ zuru.
Afọ ojuju ndị ahịa anyị na-enwe afọ ojuju, ha na-eme nke ọma ịhapụ anyị akụkọ dị ịtụnanya gbasara otu weebụsaịtị ha, nke na-adịbeghị ebe a ga-ahụ ya, nọ ugbu a n'etiti ndị saịtị kachasị elu. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịhụ karịa, ikpe ndị a nwere ike ịchọta ebe a.
Semalt emeghere onye ọ bụla, n'agbanyeghị asụsụ ị na-asụ. Ndị na-ahụ maka njikwa anyị ga-achọta otu asụsụ ha na-eme. A sị ka e kwuwe, anyị na-asụ asụsụ ndị bụ isi dịka Bekee, French, ,tali, Turkish, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Anyị ghọtara na ịmara ihe mgbaru ọsọ gị nwere ike ịda ntakịrị. Mana, site n'enyemaka anyị, ị gaghị eburu ibu ahụ naanị gị. Ndị ọkachamara anyị na-eme ka ọrụ ndị a siri ike dị mfe. Na njedebe, ebumnuche anyị bụ ijide n’aka na ọ bụghị naanị afọ ojuju kama na websaịtị gị nọ n’elu.
Gini mere ịghara idebanye aha anyị taa wee soro na ndị otu na-edu ndú !!!